အသစ်→ပိုးသန့်ဆေးရုံများ• METALCO လက်သန့်ရှင်းရေးစခန်းများ
ပိုးသန့်ဆေးရုံ / လက်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးစနစ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလှမ်းချက်တွင်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည် သေးငယ်တဲ့ဗိသုကာ။ ၎င်းသည်လက်ဖြင့်ပိုးသန့်ဆေးလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုရိုးရှင်းစေသည့်အဖြေတစ်ခုဖြစ်သည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစွန့်ပစ်ခြင်း.
ကတ်တလောက်နှင့်စျေးနှုန်းစာရင်းကို download လုပ်ပါ
လက်ဆေးခြင်းနှင့်ပိုးသန့်ဆေး ဤရွေ့ကားရောဂါများဘက်တီးရီးယားနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များပြန့်ပွား၏ထိရောက်သောကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အအရေးကြီးသောလှုပ်ရှားမှုများ, မကြာခဏလက်၏အရေပြားပေါ်မှာပစ္စုပ္ပန်။
အထူးသဖြင့်လက်ရှိခက်ခဲတဲ့ကာလ၌ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါထိရောက်စွာကောက်ယူသောကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်လက်ဖြင့်ပိုးသန့်ဆေးသည်ရောဂါကူးစက်မှုကိုလျှော့ချရန်နှင့်ရောဂါပိုးများပျံ့နှံ့မှုကိုလျှော့ချရန်များစွာအထောက်အကူပြုသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အ ဦ များတွင်သာလူ ဦး ရေပိုများသောအုပ်စုများရှိသည့်နေရာများတွင်စျေးဆိုင်များ၊ ဈေးဝယ်စင်တာများ၊ ပြတိုက်များ၊ စက်မှုဇုန်များ၊ ကဖေးများ၊ ဟိုတယ်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များတွင်လည်းဖြစ်သည်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: ခြောက်သွေ့သောမြူနည်းကို သုံး၍ အခန်းများကိုပိုးသန့်ဆေးပေးသည့်စနစ်များ
တံခါးပိတ်အများပြည်သူနေရာများမ ၀ င်ခင်၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း၊ စျေးဝယ်ခြင်းနှင့်အခြားလှုပ်ရှားမှုများတွင်လက်များကိုမကြာခဏဆေးကြောသန့်စင်ခြင်းနှင့်ပိုးသန့်ဆေးခြင်းတို့သည်လက်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းမှုများနှင့်ရောဂါပိုးမွှားများကိုထိရောက်စွာဖယ်ရှားပေးသည်။
ရောဂါဖြစ်စေသော coronavirus အပါအဝင်ဗိုင်းရပ်စ်အများစု Covid-19၎င်းသည်ဆပ်ပြာနှင့်ပိုးသတ်ဆေးကဲ့သို့ဓာတုပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ပြန့်ပွားမှုနှင့်ရောဂါကိုကာကွယ်ရန်လွယ်ကူစေသည်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ အနည်းဆုံးစက္ကန့် ၃၀ ကြာလက်ဖြင့်ဆပ်ပြာနှင့်ရေကိုသေချာစွာဆေးကြောခြင်းနှင့်မိနစ်တွင်အခြေခံသောပိုးသတ်ဆေးများအသုံးပြုခြင်းကိုအကြံပြုသည်။ အရက် ၆၀% ။
ထို့အပြင်ရောဂါကူးစက်ခြင်းမှမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်နိုင်သည် တစ်ခါသုံးလက်အိတ်, မျက်နှာဖုံးများ အဖြစ်ကောင်းစွာနှာခေါင်းနှင့်ပါးစပ်ဖုံးအုပ် ပိုးသတ်ဆေးအထည် အသုံးအများဆုံးနှင့်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်။
လက်များကိုဆေးကြောသန့်စင်ခြင်းနှင့်လက်ဖြင့်ပိုးသန့်ဆေးခြင်းတို့သည်လက်အရေပြားပေါ်တွင်ရှိနေသောပိုးမွှားများကိုဓာတုပိုးသတ်ဆေးများ အသုံးပြု၍ လျှော့ချနိုင်သည်။
ပိုးသတ်ဆေးကိုလက်ဖြင့်အရေပြားမျက်နှာပြင်သို့ပွတ်တိုက်ခြင်းသည်စက္ကန့် ၃၀ ခန့်ကြာမြင့်ပြီးသင့်လျော်သောပြင်ဆင်မှုပမာဏကိုမမေ့သင့်သကဲ့သို့လက်ဖြင့်ရောက်ရှိရန်ခက်ခဲသောနေရာများ၊ လက်ချောင်းများကြားရှိနေရာကိုပိုးမွှားသင့်သည်။
လက်များကိုမကြာခဏဆေးကြောခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းရေးသန့်စင်ဆေးကြောခြင်း၊ ၄ င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ဘေးကင်းရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်သို့သော်သူတို့သည်လက်များ၏အရေပြားကိုခြောက်သွေ့စေသည်၊ ၎င်းသည်မတည့်မှုတုံ့ပြန်မှုနှင့်အရေပြားရောင်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ လက်၏အရေပြားပေါ်တွင်အသုံးပြုသောပိုးသတ်ဆေးများ၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချရန်သင့်တော်သောလက်ဖြင့်အစိုဓာတ်ထိန်းပေးခြင်းကိုအသုံးပြုသင့်သည်။
ပိုးသတ်ဆေး လက်ရှိပိုးသန့်ဆေးမှုအတွက် Ethyl သို့မဟုတ် Propyl alcohol ကို အခြေခံ၍ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်သည်။ အကောင်းဆုံးတွင်အစိုဓာတ်ပါ ၀ င်သောအရာများပါ ၀ င်သည်။
Metalco ၏ဆပ်ပြာနှင့်ပိုးသတ်ဆေးဖြန့်ဖြူးသူများကခွင့်ပြုထားသည် သင့်လျော်ပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားသောပိုးသတ်ဆေးကိုအဆက်အသွယ်မထိုးဘဲထိုးခြင်း.
တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးစခန်းများ (သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာအချက်များ) သည်လက်တွေ့ကျပြီးကြော့ရှင်းသည့်ဖြေရှင်းနည်းများဖြစ်ပြီးမည်သည့်အခန်းတွင်မဆိုသုံးရန်သင့်တော်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများကိုလက်သန့်ရှင်းရေးစက်ရုံများအဖြစ်ဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာ COVID-19 ပြန့်ပွားမှုပါ ၀ င်သောအသုံးဝင်သောပစ္စည်းများအတွက်ဖြန့်ဖြူးရာနေရာလည်းဖြစ်သည်။ လက်အိတ်, မျက်နှာဖုံးများသို့မဟုတ်အထည်.
Metalco ပိုးသန့်ဆေးရုံများသည်အများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာများ၊ ရုံးများ၊ စျေးဝယ်စင်တာများ၊ စာသင်ကျောင်းများ၊ အားကစားရုံများ၊
ထို့အပြင်၊ ပိုးသန့်ဆေးရုံသည်လုပ်ငန်းခွင်ရှိသန့်ရှင်းရေးအခြေအနေများနှင့်အလုပ်သမားများ၏တစ် ဦး ချင်းကာကွယ်မှုအတွက်အရေးကြီးသောအထောက်အကူပြုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၀ န်ကြီးဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ coronavirus ပျံ့နှံ့မှုကိုအလုပ်ခွင်၌ပြန့်ပွားစေသည်။
Metalco ပိုးသန့်ဆေးဌာနတွင်အသုံးပြုသောအဖြေများသည်ပိုးသန့်ဆေးစက်၏လည်ပတ်မှုအမြင့်ဆုံးကိုလွယ်ကူစေသည်။ လွယ်ကူပြီးတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုစွန့်ပစ်ပစ္စည်း ဘူတာများကိုလက်တွေ့ကျကျနှင့်ပြေပြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ပြီးမိုးလုံလေလုံနေရာများတွင်အသုံးပြုရန်သင့်တော်သည်။
Matalco ပိုးသန့်ဆေးရုံတွင်အောက်ပါတို့ပါ ၀ င်သည်။
H = 1437 မီလီမီတာ, L ကို = 408 မီလီမီတာ, D = 356 မီလီမီတာ,
အတွင်းခံနိုင်သည့်စွမ်းရည် - ၆၀ လီတာ
အလေးချိန် ၂၈ ကီလိုဂရမ်ခန့်ရှိသည်
Metalco ပိုးသတ်ဆေးစက်များကို coated သံမဏိသို့မဟုတ်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအရောင်တစ်မျိုးဖြင့်ရှေ့မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည်။ ဘေးထွက်ပြားများကိုအရောင် ၇ မျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။
COLOMBO ဘူတာရုံ - သံမဏိဗားရှင်း
အများပြည်သူနေရာများနှင့်ကုမ္ပဏီများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လုပ်ငန်းခွင်များရှိအစက်အပြောက်များ၌အလိုအလျောက်ပိုးသန့်ဆေးစက်ကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည် အဆက်အသွယ်မဟုတ်သောလက်ပိုးသန့်ဆေး။
အခြေခံ module တစ်ခုပါဝင်သည်:
ရှေ့နံရံပေါ် pre-positioned တွင်း
ရှေ့တွင်အောက်သို့ကျသည့်တံခါးပါသောအခန်းနှင့်လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများ (တစ်ရှူးများ၊ တစ်ခါသုံးလက်အိတ်များ၊ မျက်နှာဖုံးများ) ကိုတပ်ဆင်ရန်အတွက်လက်ကိုင်တစ်ခု
နွေ ဦး သော့ခတ်
ပိုးသန့်ဆေးဘူတာ / ဆေးပေးစက်
စွန့်ထုတ်စက်တွင် ၈ လီတာပိုးသတ်ဆေးဂျယ်တိုင်တစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်သောဘဲဥပုံအလူမီနီယံပြွန်နှင့်သံမဏိ / ခရိုမိုဘိုင်းလက်သွယ်တန်းစက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည့်သွန်းထားသောလူမီနီယံတို့ပါဝင်သည်။
Self-based base ကိုသွပ်ရည်စိမ်ထားပြီးအမှုန့်ကဲ့သို့သောသုတ်ဆေးကဲ့သို့သုတ်သည်။
5 /5( 47 မဲ )
ကင်ဆာပိုးသန့်စက်အလိုအလျောက်လက်ပိုးသန့်ဆေးရုံအာကာသသိမ်းဆည်း BERINGအဆက်အသွယ်မရှိတဲ့လက်ပိုးသန့်ဆေးရုံအဆက်အသွယ်မရှိတဲ့ dispenserလက်ပိုးသန့်ဆေးဘို့တံခါးပိုးသန့်ဆေးဂိတ်ခွဲစိတ်လက်ပိုးသန့်ဆေးCOLOMBO အပြည့်အဝဘူတာအာကာသပိုးသန့်ဆေးလက်ပိုးသန့်ဆေးဆေးဆိုင်လက်ပိုးသန့်ဆေးအချိန်လက်ပိုးသန့်ဆေးလက်ပိုးသန့်ဆေးပေးစက်ဆံပင်ညှပ်သမားကင်ဆာပိုးသန့်ဆေးလက်နှင့်ကိရိယာများပိုးသန့်ဆေးလက်ပိုးသန့်ဆေးညွှန်ကြားချက်ဘယ်အချိန်မှာလက်ပိုးသန့်ဆေးခြေလှမ်းကင်ဆာပိုးသန့်ဆေးဖြင့်ခြေလှမ်းလက်ပိုးသန့်ဆေး ayliffeလက်သန့်ဆေး pdfအရည်လက်ပိုးသန့်ဆေးလက်ပိုးသန့်ဆေးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများအသွေးမစုဆောင်းမီလက်ပိုးသန့်ဆေးမွေးကင်းစမှာလက်ပိုးသန့်ဆေးRossmann လက်ပိုးသန့်ဆေးလက်ပိုးသန့်ဆေးအစီအစဉ်ကင်ဆာ schulke ပိုးသန့်ဆေးအရက်နှင့်အတူလက်ပိုးသန့်ဆေးအလှပြင်ဆိုင်တစ်ခုတွင်လက်ပိုးသန့်ဆေးgastronomy အတွက်လက်ပိုးသန့်ဆေးအလှပြင်ဆိုင်၌လက်ပိုးသန့်ဆေးဆေးရုံတွင်လက်ပိုးသန့်ဆေးအဘယ်သူသည်နှင့်အညီလက်ပိုးသန့်ဆေးCABRAL သာသနာecolab ကင်ဆာပိုးသန့်ဆေးလက်သန့်ရှင်းရေးသန့်ရှင်းရေးနှင့်ခွဲစိတ်လက်ပိုးသန့်ဆေးတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးနှင့်လက်သန့်ရှင်းရေးလက်သန့်ရှင်းရေးနှင့်ပိုးသန့်ဆေးသန့်ရှင်းရေးတစ်ခါသုံးလက်အိတ်ဘယ်အချိန်မှာလက်ပိုးသန့်ဆေးMAGELLANO အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနိုင်သောဖြေရှင်းချက်မျက်နှာဖုံးများလက်ပိုးသန့်ဆေးအဝတ်လျှော်လက်ဆေးခြင်းနှင့်ပိုးသန့်ဆေးhaccp လက်အဝတ်လျှော်ခြင်းနှင့်ပိုးသန့်ဆေးayliffe နည်းလမ်းကိုအသုံးပြု။ လက်ဆေးခြင်းနှင့်ပိုးသန့်ဆေးလက်အဝတ်လျှော်ခြင်းနှင့်ပိုးသန့်ဆေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအလှပြင်ဆိုင်တစ်ခုတွင်လက်များကိုဆေးကြောသန့်စင်ခြင်းဆေးရုံတွင်လက်ဆေးခြင်းနှင့်ပိုးသန့်ဆေးAyliffe နည်းပညာအရလက်ဆေးခြင်းနှင့်ပိုးသန့်ဆေးခြင်းမွေးကင်းစမှာလက် disinfect များအတွက်အရည်သင့်လျော်သောလက်ပိုးသန့်ဆေးသန့်ရှင်းအချက်purell လက်ပိုးသန့်ဆေးလက်ပိုးသန့်ဆေး schulkeပိုးသတ်ဆေးsensiva လက်ပိုးသန့်ဆေးskinsept လက်ပိုးသန့်ဆေးပိုးသန့်ဆေးပိုးသတ်ဆေးပိုးသန့်ဆေးရုံပိုးသန့်ဆေးရုံလက်ပိုးသန့်ဆေးရုံသန့်ရှင်းရေးဌာနသန့်ရှင်းရေးဌာနပိုးသန့်ဆေးရုံပိုးသန့်ဆေးရုံMetalco ပိုးသန့်ဆေးရုံပိုးသန့်ဆေးရုံသန့်ရှင်းရေးဌာနမြူခြောက်tenzi လက်ပိုးသန့်ဆေးဆံပင်ညှပ်သမားတစ် ဦး ၏လုပ်ငန်းခွင်၌ကင်ဆာရောဂါသည်အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးကြောင်းရှင်းပြပါVESPUCCIအဘယ်သူသည်ကင်ဆာပိုးသန့်ဆေးလက်ဖြင့်ပိုးသန့်ဆေးသည့်နေရာ- ရပ်တည်သည့်လက်သန့်ဆေးသန့်စင်ကင်ဆာပိုးသန့်ဆေးဘို့ဂျယ်လ်